Raila oo sheegay in Kenya ay noqon karto halbowlaha ganacsiga ee Afrika | Star FM
Home Wararka Kenya Raila oo sheegay in Kenya ay noqon karto halbowlaha ganacsiga ee Afrika
Raila oo sheegay in Kenya ay noqon karto halbowlaha ganacsiga ee Afrika
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sheegay in hadii la sameeyo isbeddel ballaaran oo dhanka ganacsiga ah , Kenya ay noqon karto meel dhinaca ganacsiga qaaradda Afrika loogu soo hirto.
Mr. Odinga ayaa xusay in si tani loogu guulaysto ay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo nidaamka maamulka ee kala dambeynta , in aan loo dulqaadan musuqmaasuqa iyo habacsanaanta dhanka waxqabadka shaqo.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa qoraal uu maanta soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in iyadoo la sameynayo maalgelin la xiriirta nabadgalyada in dhanka kale dadaal badan lagu bixiyo mideynta bulshada si aysan ugu kala qaybsamin qabiil ama diin.
Qoraalka siyaasigan waxaa qayb ka ah in waaxda garsoorka laga doonayo inay u shaqeyso si caddaalad iyo daahfurnaan leh.
Waxaa uu intaa ku daray in maalgashatada iyo shacabka ay u baahan yihiin in loo xaqiijiyo ka dib marka uu muran soo baxo in ay jirto wax si degdeg oo aan cidna loogu eexan xal uga gaarta.
Raila Odinga ayaa sidoo kale tilmaamay baahida loo qabo in dadweynaha lagu wacyigeliyo arrimaha horumarka.
Waxaa uu xusay in shaqaalaha waaxyaha kala duwan oo tababar ku filan la siiyo ay door wayn ka qaadan karto in Kenya ay la tartanto wadamada kale.
Hoggaamiyaha ODM waxaa uu ku taliyay in ka dib marka dhallinyarada la siiyo tababarro in la shaqaaleysiiyo iyadoo la eegaya aqoonta iyo kartida qofka.
Waxaa uu sidoo kale ka hadlay canshuurta la qaado oo uu soo jeediyay inay noqoto mid aan culeys xad dhaaf ah ku keenin shacabka.
Raila ayaa dhanka kale xusay inay jiraan xeerar adag oo lagu maamulaya adeegyada loo fidiyo dadweynaha.
Talooyinka uu bixiyay madaxa ODM waxaa ka mid ah in la sameeyo maalgashi dhanka kaabayaasha gaadiidka , wax soo saarka , caafimaadka iyo isgaarsiinta ah.
Previous articleDHAGEYSO:Wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray Kisii
Next articleBoolis baxsad ah oo la raadinaya